Dalka Shiinaha, weli waxaa jira kalluumeysato badan oo weli adeegsada habka kalluumeysiga caadiga ah ee usha kalluumeysiga, laakiin ma jirto wax usha kalluumeysi ah oo dibadda ah, waxayna doorbidaan inay u isticmaalaan kalluumeysiga kalluumeysiga. Waa maxay sababtu? Waa maxay sababta ay u kala duwan yihiin? Marka xigta, raac KK si aad u sahamiso! 1, aagga Kalluumaysiga The ...
Waa maxay farqiga u dhexeeya maraakiibta kalluumaysiga ee leh dhexroorka koobka 3000 iyo dhexroorka koobka 4000?
Doomaha kalluumeysiga waxaa u dhexeeya saddex farqi oo kala ah 3000 iyo 4000. Dhererka xarigga kalluumeysigu wuxuu ku kala duwan yahay koobka, xawaaraha wax lagu helaa wuu kala duwan yahay, miisaanka doonta kalluumeysiguna wuu ka duwan yahay; Marka la isticmaalayo doonyaha kalluumeysiga badda, heerarka moodeelka ee doonyaha kalluumeysiga waxaa badanaa lagu calaamadeeyaa ...
Maaha wax ku adag Lure inuu doorto kabaha kalluumeysiga ee saxda ah sida saxda ah
In kasta oo kheyraadka gudaha ee soo jiidashada uusan u fiicnayn kan waddamada shisheeye, haddana micnaheedu maahan inaysan jirin kalluun loo tago Lure. Maaddaama uu yahay mid ka mid ah kalluunka loo jecel yahay Lure, qiaozui aad buu caan uga yahay dadka Lure. Waxaa ugu weyn sababtoo ah afka Lure ayaa aad u xiiso badan, gaar ahaan maya ...
Alaabooyinka taxanaha YAMASHITA
—— Raadinta LIVE —— Kuullada giraanta ee ku dhex jira, jirka iftiimay waxaa lagu duudduubay maro kaamil ah oo tayo sare leh, waxaana la jaanqaaday mowjadda qaaska ah ee 490 iftiin oo u muuqan kara ...
Geesigu ma weydiiyo isha? Kani waa habka kalluumaysiga ugu quudhsan kalluumaysatada Taiwan!
Dhawaan, hab kalluumeysi ayaa Internetka ku qabsaday duufaan. Habkan kalluumaysiga wuxuu u baahan yahay oo kaliya hal ul iyo hal sadar. Loolan looma baahna, iskaba daa wax hagaajin! Kani waa kalluumaysiga ul caajis! Qaar badan oo ka mid ah kalluumaysatada Taiwan "sayid" ayaa laga yaabaa inay quudhsadaan habkan kalluumaysiga oo si toos ah ...
Alaabooyinka taxanaha MARIA
—— DUPLEX —— Mino-ga caadiga ah, oo ay tahay in laga helo kalluumeysiga badda, waa xiddigga saddex fiiqood ee fiiqan —— LEGATO F190 —— ...
Kalluumeysiga jiilaalka, qabta “kalluunka” waa furaha!
Fahamka caadooyinka kalluunka ayaa qayb muhiim ah ka ah hagaajinta heerka kalluumeysiga! Dhammaanteen waan ognahay in kalluunka ay adag tahay in la qabto xilliga jiilaalka, laakiin ma taqaan caadooyinka kalluunka la beegsanayo ee jiilaalka? Kaliya markaan naqaanno caadooyinka jiilaalka ee kalluunka, miyaan isbeddel ku samayn karnaa sedka, khadka ...
Kalluumaysiga kalluumaysiga ee Master Kawakami, sida loola macaamilo badda dhiiqada leh?
Shenzhen waxay hadda la kulantay afhayeenka YAMARIA Mr. Hideyo Kawakami iyo Mr. Guo Ji, madaxa Shiinaha Waxay timid halkan ka dib markii duufaantii Diyaarisay inay tijaabiso dabaysha dabaysha dabaysha badan ka dib Baadhitaanno badan Yangmei Keng ayaa loo doortay inay noqoto goobta tijaabadan kalluumaysiga badda mugdiga badan ee dabayshu ...
Octopus, squid, squid, cuttlefish, maxay ku kala duwan yihiin?
Hal mawduucu waa ka duwan yahay 1. Octopus Bai: Octopodidae. 2. Squid: Du family of Calamari, Family Decarbonidae. 3. Squid: Squid order Radix Aconzhi Sidae. 4.Cuttlefish: Tenebrionidae, Dalbo Decarbida. Laba characteristics Sifooyin qaabdhismeed kala duwan 1. Octopus: Jirka octopus waa gaaban yahay oo oval ...
Ulaha Glowga ah ee Kalluumeysiga Qiimaha Jumlada ah
Glow With Us wuxuu bixiyaa ulaha dhaldhalaalka kalluumaysiga ee ugu tayada sarreeya qiimaha jumlada hoose. Ulaha dhalaalaya ee kalluumeysigu waa kuwo bey'adda u fiican, dillaaca & daadinta u adkaysta iyo huurka. Sidee u shaqeeyaa ulaha iftiimaya kalluumeysiga? Ulaha Kalluumeysiga ee Glow Glow waxay adeegsadaan falcelinta kiimikada si ay iftiin u soo saaraan. Marka gudaha ...
Beacon vs ulaha dhalaalaya ee khadka tooska ah .. sababta aan ugu beddelay kuwa ka raqiisan ka dib markii aan isticmaalay magacyada magacyada sannado.
Fiiro gaar ah: Xidhmada warshaddeena: 2pcs/bac, 50bag/sanduuq gudaha ah, wadar ahaan 100pcs Ganacsiyo kale oo ku jira xirxirida madal: 5pcs/bac, 10bag/sanduuq gudaha ah, Guud ahaan 50pcs Qiimaha warshadeena waa kan ugu hooseeya. Annagu ma nihin shirkad ganacsi, Waxaan macaashka dhexdhexaadinta si toos ah u siinnaa macaamiisheena ....
Horumarinta warshadaha kalluumaysiga
Sida laga soo xigtay tirakoob aan dhammaystirnayn oo ay soo saartay Ururka Kalluumeysiga Shiinaha 2015, waxaa jira qiyaastii 120 milyan oo qof oo ka kalluumeysta Shiinaha (tirada dadka ka qeybgalaya kalluumeysiga ugu yaraan afar jeer sannadkii). ee ...